Nhau - Floor kukuya zvinoreva kurapa kurapwa kwekongiri / dombo / terrazzo / epoxy pasi
Kugaya pasi kunoreva kurapa kurapwa kwesamende / dombo / terrazzo / epoxy pasi
Kugaya pasi kunoreva kurapa kwekongiri / dombo / terrazzo / epoxy pasi, iyo inonyatso polisha terrazzo, kongiri yepamusoro, epoxy dhaka nhete uye epoxy yekare pasi, nezvimwe izvozvi izvozvi ndakashandisa iyo fekitori yakanangana neHTC Diamond Kukuya Shangu dzeKongiri neTerrazzo Uriri kune wekutanga nhanho Rough kukuya, mukuita kwehukuru hukuru hweatatu Rhombus Zvikamu Kugaya Bhutsu kukuya kwakanaka, kupukuta uye mamwe matanho.
Gadzira pasi pekuchenesa, kupenya, uye kutsetseka, nokudaro nekuvandudza aesthetics yepasi. Anowanzo shandiswa pasi ekugedza maturusi ari Floor kukuya muchina 490, yakakwira makorari muchina uye zvimwe zvinoenderana michina.
Maitiro eruzevha ekuGaya pasi achikuya block wholesaler anoshanda sei?
1. Surface kurapwa: Shandisa isina guruva-isina madhaimani grinder kubvisa iyo inoyerera guruva pane simende pamusoro uye oumba yakaoma nzvimbo pamusoro. Shandisa mudziyo wekuchenesa kubvisa jecha, marara uye guruva. Pukuta nzvimbo yakanyorova negasi kana chinomesa.
2. Primer: Isa iyo huru mumiririri uye kuomesa zvinhu zvakaenzana, sanganisa zvizere nemusanganisi, uye zvakaenzana kupfeka izvo zvinhu nebrashi, roller bhurashi kana pfuti pfira kana iri kushandiswa kugadzira pendi yekutanga, uye pendi kurodha nguva inopatsanurwa Anopfuura maawa masere.
3.Mukati wepakati: Kutora chiyero cheiyo huru mumiririri uye hardener, ichikurumidze zvakaenzana nemusanganisi, wozoisa muquartz aggregate, fambisa zvakaenzana, shandisa trowel kunyorovesa musanganiswa uri pamusoro pamusoro peiyo yekutanga mukati menguva inoshandiswa. , Saka kuti maburi nemakona azadziswe.
4. Jasi repamusoro: Mushure mokunge resini yejasi repakati yaomeswa, kana paine zvimedu pamusoro, inofanira kutanga yadzurwa, uye maburi anofanira kuzadzwa, uyezve wozotora huwandu hwenzvimbo yemumiriri mukuru uye kuomesa. kumutsa zvizere nekusanganisa, uye kuyera iwo wepakati jasi netiroweli. Panguva imwecheteyo, pamberi pekumisa simiti, tsono roller inoshandiswa kudzosera shure uye mberi padhishi revhu, kuitira kuti uwandu hwese hugovaniswe zvakaenzana uye mabhuru emhepo abviswe, kuitira kuti iro resini pamusoro riite mvere uye rijeka.
Dombo kupora maitiro: Dombo makorari inzira yakakosha yekuchengetedza dombo. Mamwe matombo anogona kukwenenzverwa zvakananga.
Chinangwa chikuru chekukorobha ndechekuwedzera kupenya kwedenga pamusoro. Kukoromora matombo kunowanzoitwa zvichienderana nemaitiro ekugaya zvakashata → kukuya-kwakanaka-kugaya → kukuya kwakanaka → kugaya kwakanaka → kupukuta, uye mamwe ematanho ekugaya asina kusiiwa, kunyanya zvichienderana nekuti pamusoro pebwe rekutanga rakaita kutanga kurapwa.
Kukuya kwakakora: Iyo yekugaya disc inofanirwa kutora banga rakadzika, iko kukuya kushanda kwakakwirira, iyo yekukuya pateni yakaoma, uye pasi pevhu pakaipa. Inonyanya kubvisa mucherechedzo blade mamaki akasiiwa nedombo mune yapfuura maitiro uye kutsetseka kwedombo, Iyo yekumusoro yepamusoro ivhu munzvimbo;
EmiSemi-yakanaka kukuya: bvisa zvisaririra zvekugaya kwakashata kuti uite mitsara mitsva, kuitira kuti pamusoro pebwe rotsvedzerera uye rakatsetseka;
IneFine kukuya: Iyo pateni, zvidimbu uye ruvara rweibwe pamusoro mushure mekugaya kwakanaka kwaratidzwa zvakajeka, iyo nzvimbo yakanaka uye inotsvedzerera, uye kune isina kusimba kubwinya;
IneFine kukuya: Icho pamusoro pebwe mushure mekuyera chaiko, pasina chero chiratidzo chemeso akashama. Iko kumeso kuri kuwedzera kutsetseka, uye kubwinya kunogona kusvika pamadhigirii makumi mashanu nemashanu kana kupfuura;
⑤ Kukorobha: Shandisa yakakosha girenayiti yekupuruzira muchina kukuya ibwe kubva pane rakashata kusvika padombo rakajeka kubva kuNhamba 50 kusvika paNhamba 3000 kuti ivhu riwedzere kupenya uye kutsetseka senge nyowani. Dombo rakakwenenzverwa pamusoro paro rakajeka segirazi, uye kubwinya kwaro kunogona kusvika pamusoro pe 85 degrees. Zvinoenderana nemhando dzakasiyana dzematombo, akasiyana polishing maitiro anoshandiswa.
1. Maitiro epurasitiki epaneru: tarisa mamiriro ezvinhu-girazi kugadzirisa-tarisa usati watanga-kumusoro ndiro-yekucheka-tanga yega yega yekukuya musoro mukutarisa-tarisa mamiriro epurasitiki-gadzirisa maparamende-kuomesa-kuneta, kuchenesa -Inspection-yakaderera bhodhi-kurongedza.
2. Kukuya nekukorobha maitiro eari arc pani: tarisa zvinhu mamiriro-glue kugadzirisa-bhuku rakaomarara kukuya-kuongorora-yepamusoro bhodhi-tarisa usati watanga-rough kukuya-tarisa zvakashata kukuya mamiriro-akanaka kukuya-kupora-tarisa kupora mamiriro-ezasi bhodhi.
3. Kukuya nekukorobha nzira yemitsara yakasarudzika: tarisa mamiriro echinhu-tarisa kana chimiro chechimiro chakakodzera-dhonza mitsara zvinoenderana neyakajairwa template-yakashata kukuya mativi ese-akaomarara kukuya kubva kumagumo maviri kusvika yepakati-yakanaka kukuya-kurongedza-mvura chigayo banga 400 # Mushure mekubvarura-kukuya uye kupora-kuongorora.